Kuo wuxuu sii wadaa saadaashiisa Macs ee 2021 | Waxaan ka socdaa mac
Kuo wuxuu sii wadaa saadaashiisa Macs ee 2021
Waxaa jira wax kayar oo kayar imaatinka sanadka 2021 waxayna tani noqon doontaa sanad kale oo cajiib ah marka loo eego Macs iyo alaabada kale ee shirkada Cupertino. Dareenkan, 2020 ayaa naga tegaya xilligan processor-ka cusub ee loo yaqaan 'Macs', kani waa M1 wuxuuna ku saleysan yahay ARM laakiin lagama heli karo dhammaan qalabka Apple. Xaqiiqdii inta ka hartay Mac-da cusub ee 2021 waxay bilaabi doonaan inay keenaan processor-yadaas iyo sidoo kale Sida laga soo xigtay falanqeeyaha Ming-Chi Kuo, MacBook Pro cusub iyo MacBook Air waxay yeelan doonaan shaashad miniLED ah.
Sanadka 2022 isbedelka naqshadeynta ayaa lafilayaa sida uu qabo Kuo
Taasina waa in dad badani sugayaan isbeddel ku yimaada naqshadeynta MacBookga hawada iyo MacBook Pro, marka loo eego Kuo tani ma imaaneyso illaa 2022. Xilligan la joogo waxa miiska noo yaal waa ikhtiyaarka in lagu daro shaashado yaryar oo miniLED ah shaashadaha Mac-yadan cusub, wax aannu sidoo kale dhagaysanaynay muddo dheer oo ay dhici karto inay run noqdaan sannadka dambe. Waxa cad ayaa ah in Apple Silicon uu halkan joogo oo tanna ay noo cadahay.
Sida laga soo xigtay Kuo, iibka Mac ayaa si aad ah kor ugu kici doona saddexda sano ee soo socota taasna waxaa u sabab ah isbeddelada ay Apple ku soo bandhigayso iyaga oo la socda M1-yada cusub, qiimaha jaban ee ay u isticmaalayaan iyo isbeddelada imanaya sanadkan. In Macrumors muuji warbixinta falanqeeyahaan iyo ugu yaraan laba cusbooneysiin ayaa laga filayaa qalabka Apple ee 2021 diirada saaraya shaashadda, inta hartay ee isbeddelada suurtogalka ah ee xiga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Kuo wuxuu sii wadaa saadaashiisa Macs ee 2021
Ku dar koodh ka badan afar lambar Apple Watch-kaaga